श्री श्री रवि शंकरका जीवनोपयोगी भनाइहरु - Safal Stories
Home Safal's Columns Quotations श्री श्री रवि शंकरका जीवनोपयोगी भनाइहरु
रवि शंकर आध्यात्मिक गुरु हुन् । उनको जन्म १३ मे १९५६ मा भएको थियो । उनलाई ‘श्री श्री’, ‘गुरुजी’, ‘गुरुदेव’ नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । उनी ‘आर्ट अफ लिभिङ्ग ‘ का संस्थापक हुन् ।
जिन्दगीलाई धेरै गम्भीरताका साथ नलेऊ । जिन्दगी भनेको खेल खेल्ने भकुण्डो जस्तै हो । भकुण्डो हातमा लिएर बस्ने होइन, खेल्ने हो ।
तिम्रो मुस्कानलाई सस्तो र रिसलाई महँगो बनाऊ ।
किन तिमी आफू कमजोर छु भन्ने सोंच्छौ ? आँखा खोल र आफूभित्र हेर । आफूलाई बुझ । तिमी कैयौं गुणा बलियो छौ ।
टाउको पछाडी फर्काएर अगाडी हिंड्न खोज्छौ भने तिमी लड्छौ । पछाडी फर्केर नहेर, अगाडी बढ ।
जिन्दगी भनेको तिम्रो भाग्य र तिम्रो रोजाइको संगम हो । पानी पर्नु भाग्य हो भने, त्यो पानीमा भिज्नु या नभिज्नु तिम्रो रोजाइ हो ।
जब तिम्रो लागि सबै ढोका बन्द हुन्छन् , तब तिमीले आफ्नो बाटो पत्ता लगाउँछौ ।
तिमीलाई अरुको कुराले भन्दा बढी तिम्रै आफ्नै सोंचले दु:ख दिन्छ ।
यदि तिमीले आफ्नो दिमागमाथि विजय प्राप्त गर्छौ भने तिमीले सिंगो संसार जित्न सक्छौ ।
यदि केही कुराले तिमीलाई अति खुशी दिन्छ भने त्यो कुराले तिमीलाई अति पीडा पनि दिन्छ ।
आफ्नो वरिपरि भएका सबै घटनाहरुको आफू साक्षी मात्र हूँ भन्ने बुझेको दिन तिमी स्वतन्त्र हुन्छौ ।
खुशी कहिल्यै पनि भोलिमा हुँदैन, आजमा हुन्छ ।
हामीले सधै अरुबाट आफ्नो समस्याको समाधान खोज्छौं । यो बिर्सिन्छौँ कि, आफैले आफ्नो दिमागलाई फरक कोणबाट सक्रिय गरायौं भने त्यही समाधान भेट्नेछौं ।
भइसकेको कुरामा रिसाउनु या पश्चाताप गर्नु मूर्खता हो । फेरी त्यही गल्ती नदोहोरियोस् या फेरी त्यही परिस्थिति नआओस् भनेर सचेत रहनु बुद्धिमानी हो ।
खुशी खोज्ने बानीले व्यक्ति दुखी बन्छ ।
घमण्ड या अहंकारले जित्छौ भने त्यो जित पनि तिम्रो हार हो । प्रेमले हार्छौ भने त्यो हार पनि तिम्रो जित हो ।
प्रेम भनेको अरु कोही व्यक्तिमा तिमीले भगवान देख्नु हो भने मेडिटेसन भनेको तिमीले आफू भित्र भगवान देख्नु हो ।
यदि तिम्रो दिमाग खुशी छ भने तिमीले काममा कुनै दबाब महसुस गर्दैनौ ।
कुनै पनि किसिमका भावना या आवेग गलत होइनन । तर ती भावना या आवेग धेरै समयसम्म रहिरहे भने ती गलत हुन पुग्छन् ।
पूर्णता खोज्नुले रिस निम्त्याउँछ । कुनै पनि कुरा पनि ‘पर्फेक्ट’ हुँदैन भन्ने कुरालाई मनमा राख ।
Previousमानिसहरुसंगको सम्बन्ध अर्थात् आफ्नो नेटवर्क कसरी बढाउने ?
Nextप्रेरक प्रसङ्ग : गल्ती